Tsara tarehy indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Italia Lakes | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > Tsara tarehy indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Italia Lakes
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 06/02/2021)
Amin'ny sasany ny haingana indrindra Eoropa fiarandalamby ary indrindra Toerana mahafinaritra lalana, Nandeha tsara tarehy indrindra Lakes any avaratr'i Italia lamasinina dia ara-toekarena, aina, ary mitarika, fanatitra hahatakatra ny ny fiainana eo an-toerana, matetika amin'ny fomba fijery lehibe natsipy tao amin'ny mpiady varotra.
Amin'ny kely savvy lalana-planning ary vonona ny hilefitra fandaharam-potoana, dia afaka miara-tena mora foana sombin iray izay faritany haleha izy hanao ilay dia miavaka toy ny toerana halehany.
Mitsidika Northern Italia
Toy ny ankamaroan'ny firenena, Italia manana ny North-Atsimo zarao amin'ny Northern Italiana mirehareha fa mamorona ny firenena ara-toekarena sy ny orinasa hazondamosina powerhouse.
Avy eyewear ny lamaody ny sakafo, Ny faritra avaratr'i Italia kaonty mahery 50% ny Italiana na dia eo aza ny toe-karena ... misy latsaky ny antsasaky ny firenena mponina!
The 8 faritra ireo:
Noho ny tandavan-tendrombohitra roa, dranomamy farihy dimy, Rolling havoana, ary be olona na be seranan-tsambo, misy maro ny fahasamihafana in Avaratra Italia, na dia ao fohy lavitra. Afaka manomboka ny fialam-boly amin'ny herinandro any Dolomites ianao, laze about in Lake Como sy hamarana ny diany fanasambe amin'ny hazan-dranomasina ao amin'ny Cinque Terre!
Ireo izay kokoa lamaody sy ny sakafo tsy ho diso fanantenana na. Mena-tanàna roofed-pitiavana toy ny Bologna dia heverina Italia tanàna gastronomic po raha Parma manodidina dia izao tontolo izao-kilasy sy ny mpamokatra ny prosciutto Parmesan.
dia, mazava ho azy, misy tanàna roa malaza eto Milan ary Venice mba mahita any avaratr'i Italia! Matokia ahy raha lazaiko, isaky ny mpitsidika dia hahita zavatra ho tia eto.
Fa ny tena manovaova, ianao dia tokony manofa fiara rehefa mandeha ny mahita Lakes isan-karazany ao amin'ny faritra avaratr'i Italia. Raha te-miantehitra-bahoaka fitaterana, it is definitely doable.
Farihy in Northern Italia – Lake Como
Lazao Lake Como ny olona sy ny vintana dia, dia mazava ny masony, ka dia miteny hoe "George Clooney!"
Lake Como, fantatra koa amin'ny hoe Lario, no faratelo lehibe indrindra amin'ny farihy any avaratr'i Italia, amin'ny ambony indrindra ny eo ho eo ny halaliny 410 metatra (448 metatra), koa iray amin'ireo farihy lalina indrindra any Eoropa.
Fast Marina: Fantatrao ve, ny endrika mampiavaka, mampahatsiahy ny iray mitsongoloka Y, vokatry ny mpandrendrika ny vongan-dranomandry mitambatra ny erosive zavatra ny fahiny ony Adda. Izany dia nitarika ho amin'ny fananganana ny sampany roa atsimo, eo afovoan'ny izay misy dia izao tontolo izao malaza Bellagio.
Any am-pototry ny Nanketo Alpes eto, Lake Como dia manome iray amin'ireo indrindra tsara tarehy censorious eto amin'izao tontolo izao. Raha toa ianao handeha hitsidika ny farihy Italiana, dia ho gaga ianao hahafantatra momba ny zavatra maro atao, ankoatra ny malaza Lake Como spotting!
Aho amin'ny sambo!
Ankoatra ny zava-misy fa mahazo ny faritra avaratr'i Italia lamasinina dia no-brainer, we’ll admit hitching a ride on a boat is pretty cool too. Especially if you want to traikefa Lake Como indrindra amin'ny endriny tsara indrindra.
Na ianao mitsidika Lake Como iray andro na mitoetra intsony, hitsambikina tao an-tsambokely, tony sy hahatratra ny toerana tena tanàna: Bellagio, Varenna, toy ny, na angamba ny iray tamin'ireo ara-tantara raitra ny amoron'ny farihy.
Lake Garda dia iray amin'ireo lehibe indrindra Farihy ao amin'ny faritra avaratr'i Italia ary ny lehibe indrindra amin'ny farihy Italia glacial farihy dimy, sakafo ny Nanketo Alpes eto ao amin'ny avaratra. Avaratr'i Verona, Lake Garda no tena fianakaviana – sy ny rano fanatanjahan-tena mitodika ny Italia farihy. Izany ihany koa Italia farihy lehibe indrindra, nahatratra avy any Alpine an'ilay fiakarana, be lemaka amoron-tsiraka tany avaratra lelan-Po Valley.
Ny atsimo dia nilahatra amoron-dranomasina ny torapasika, ary tohanan'ny ambany havoana. Raha ao amin'ny avaratra, tendrombohitra ary ny herintsaina harambato somotraviavy ny farihy, indrindra fa eny an- Western amoron-dranomasina. Ny lalana manome ny farihy iray maro samihafa ny manintona ho an'ny fanatanjahan-tena tia mpizaha tany. Avy amin'ny tapaka sy ny rivotra noho ny mandeha sambo ny windsurfing ny tendrombohitra noho ny rehefa niakatra, rappelling, ary ny tendrombohitra mitaingina bisikileta, rehetra amin'ny farihy hevitra.
Na dia ny vaovao tsara. Lake Garda toerana manome azy isan-taona-manodidina mahonon-tena toetrandro izay oliva sy ny voasarimakirana mitombo tsara avaratr'i ny mahazatra isan-karazany. Lavorary ho an'ny sasany tolakandro G&T! Add long sandy tora-pasika ary ny clutch ny tanàna amin'ny farihy promenades hevitra. Efa nahazo ny tenanao ny tonga lafatra fialan-tsasatra toerana halehany!
Koa inona no tsapanao toy ny manao handeha hahita Lakes in Avaratra Italia? Te-hamonjy ny fotoana sy ny vola raha mbola Mandehandeha any Italia avaratra amin'ny lamasinina? Boky rehetra ny fiaran-dalamby mampiasa tapakila Save A Train in minitra, tsy misy miafina sarany!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-lakes-northern-italy/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ja ny / na / tr sy ny maro hafa fiteny.
#lago #farihy #LakeComo #LakeGarda #NorthItalyTravel northitaly NorthItalylakes
Train Travel Belzika, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Travel Europe